Isu keenista qoysku waxey quseeysaa oo kaliya qoyska rasmiga ah - Asylum in Finland
Xubnaha qoyskaadu waxey xiriir qoys ku codsan karaa ogolaanshaha degitaanka ee Finland marka aad adigu codsigaada megangelyada ka hesho go’aan ogolaansho ah kaddib. Waa in loo diyaargaroobo in helitaanka go’aanka ee codsigaada iyo codsiyada xubnaha qoyskaadu uu qaadan karo waqti dheer, marka la isu geeyo illaa iyo sanado laga soo billaabo ka soo tegitaanka dalkaadi. Marwalba laguma guuleysto in qoyska la keeno Finland.
Aragtida qoyska ee Finland waa mid yar marka la barbardhigo wadamo kale oo badan. Ogolaanshaha degitaanka waxaa sida caadiga ah loo ogolaadaa qoyska rasmiga ah oo kaliya. Qoyska rasmiga ah waxaa loo xisaabiyaa marka laga hadlayo qof qaangaar ah xaas iyo carruurta aan qaangaarin, kuwaas oo uu mas’uul ka yahay qofka qaangaarka ah ee qoyska. Qoyska qofka aan qaangaarin waxaa ku jira waaldiinta iyo walaalaha aan qaangaarin.
Qoyskaadu wuxuu si elekterikaal ah u codsan karaa ogolaansha degitaanka Finland isagoo isticmaalaya bogga Enter Finland. Ogolaanshaha degitaanka waxaa laga codsan karaa sidoo kale safaaradda dibadda ee Finland.
Dhammaan xubnaha qoyska ee codsanaya ogolaanshaha degitaanka waa in ay tagaan safaaradda Finland si ay isu caddeeyaan farana looga qaado. Sidan waxaa la sameynaa xittaa marka ay qoyskaadu ku sameyanayaan codsiga ogolaansha degitaanka qaab eleketerikaal. Wareysiga laga yaabo in lala yeesho xubnaha qoyskaada ayaa sidoo kale looga qaadayaa safaraadda.
Maadaama aysan Finland wakiil ku laheyn dal kasta, xubnaha qoyskaada waxaa ku dhici karta in ay u safraan wadan kale. Markaasna waa in ay qoyskaadu u diyaargaroobaan codsashada wadanka ay tegayaan fiisadiisa.
Codsiyada ogolaansha degitaanka ee xubnaha qoysku waqtiyadan waa kuwa markasta lacag ah. Ka baaraandegista codsigaada waxaa la bilaabaya marka aad bixiso lacagta ka baaraandegista.
Qoyskaada in la siiyo ogolaanshaha degitaanku waxey sida guud ku xiran tahay in dhaqaalaha noloshaadu dammaanad-qaadan yahay aadna awooddo in aad biilato qoyskaada. Dhaqaale nololeedka kugu filan waxaa laga xisaabiyaa tusaale ahaan dakhliyada mushaarka, dakhliyada kaa soo gala hawlaha ganacsiga ama dakhli hantiyeed.
Shuruudda dhaqaalaha nolosha la isagama baahna, haddii aad Finland ka heshay megangelyo, derajo qaxooti 1.7.2016 ama kaddib. Waxaa intaas dheer oo lagaa doonayaa in qoyskaadu uu ku codsado ogolaanshaha degitaanka saddex bilood guduhood oo laga soo billaabayo maalinta lagu ogeysiiyay go’aanka megangelyada iyo in qoyskaadu jiray kahor inti aadan imaanin Finland.
War-saxaafadeed: Xubnaha qoysku waxey codsan karaan ogolaansha degitaanka kaddib marka aad hesho go’aanka megangelyadaada.
codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka qoys dhaqaalaha nolosha nidaambka Dublin